SP-G09 SOICARE 200ml keramika vita amin'ny aromatherapy tena ilaina menaka Diffuser, China SP-G09 SOICARE 200ml keramika volom-bolo Aromatherapy Tena ilaina menaka Diffuser mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Sunpai Industries Limited
SOICARE 200ml keramika vita amin'ny seramika aromatherapy Diffuser tena ilaina
1. MANatsara ny hatsaran'ny rivotra: ankoatry ny fampiasana azy amin'ny aromaterapy, ity diffuser menaka manitra ity dia miasa ho toy ny hamandoana ihany koa. Ampiasao izany hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra sy ny rivotra ao an-tranonao, hiarovana anao mianakavy amin'ny rivotra maina be, zavamiaina bitika, allergenie, vovoka ary maro hafa!
2. MAMPIASA FARANY MAMPIASA: Ny mpanala dia miaraka amina takelaka rano 200ml izay ahafahanao mankafy ny fofona nefa tsy misy afo mandrehitra ao anatin'ny 2 MIST MODES: Modely mitohy dia manome aromaterapy mahery vaika, Mod Intermittent ((10 sec ON, 30 sec OFF) ) manome maharitra mandritra ny 30 ora miaraka amin'ny fofona malefaka.
3.Fandriam-pahalemana: Mampiasà teknolojia ultrasonic, ity diffuser menaka manitra ity dia mamokatra zavona malefaka sy mitohy hamandoana ny rivotra sy ny hanitra an-trano. Ny fandidiana mangina mangingina dia tsy hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny torimaso.
4.Safe & Auto-off: ity diffuser hanitra ho an'ny huile essentielle ity dia afaka maharitra 5-10 ora. Ity diffuser huile essentielle ity dia hikatona ho azy aorian'ny fandehanan'ny rano ho fiarovana anao sy ny fiarovana ny diffuser de aroma koa.
Fitaovana Seratra volotsangana + hazo ++ PP
Light Mafana mavo
Fahadisoam-bokatra 15-20ml / h
Fotoana farany 5-10hours
Haben'ny vondrona Φ135 * 110mm
Unit lanja 580g
Ny haben'ny boaty loko 156 * 156 * 143mm
Carton size 33 * 49 * 31CM
NW / baoritra 7kgs
GW / baoritra 7.8kgs
SP-A07 800ml WIFI APP mifehy ny milina fanentanana Air Scent
SP-USB09 diffuser tsy misy rano miady